Elungiselelweyo Natural latex umqamelo umqulu Thailand abavelisi From China | Rayson
Rayson kwiRayson yeNdawo yezeMizi-mveliso, eHuasha Road, eShishan, eFoshan High-Tech Zone, eGuangdong, China. Iimveliso eziphambili ezenziwe ngokwezifiso zabenzi bemveliso yelatex yaseThailand ezivela eChina
Ukuqwalaselwa koyilo lukaRayson kugubungela le miba ilandelayo: ukuqina kokuqina kunye nokuqina, isantya sokusebenza, iibhokisi zegiya, incwadi yesandla kunye nolawulo oluzenzekelayo.
Oko kwamiselwa, uRayson ujonge ukubonelela ngezisombululo ezibalaseleyo nezinomtsalane kubathengi bethu. Simisele eyethu i-R
D iziko loyilo lwemveliso kunye nophuhliso lwemveliso. Kuyo yonke le nkqubo, iingcali zethu ze-QC ziya kubeka esweni inkqubo nganye yokuqinisekisa umgangatho wemveliso. Ukuza kuthi ga ngoku, uRayson upasile isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho wamanye amazwe Zonke iimveliso kubandakanya imveliso yethu entsha & zinikezelwa kuyilo olutsha, umgangatho oqinisekisiweyo, kunye namaxabiso okhuphiswano. Uhlala ixesha elingakanani umatrasi wakho? Yonke imatrasi yahlukile. Ukuba uphosa ebusuku okanye uvuke ngentlungu lixesha lokuba ufumane umatrasi omtsha nokuba ungakanani na. Sincoma ukuba ujonge i-tag yomthetho kwaye utshintshe ubuncinci yonke iminyaka esibhozo. Ungacela inkampani yokubonisa ukuba ithathe isampuli kwinkampani yethu okanye ungasithumela i-DHL, i-FedEx okanye i-UPS yokuqokelela inombolo yeakhawunti, singathumela isampulu kuwe ngeakhawunti yakho .Ungandinceda ndenze uyilo lwethu okanye ndisebenzise logo kwimveliso? Sinako ukwenza umatrasi ngokokuyila kwakho okanye ukubonelela ngenkonzo ye-OEM sifuna nje ukuba usinike imveliso yakho okanye imifanekiso yelogo.